कसले गर्‍यो राष्ट्रपति भण्डारीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड ? राजकीय भ्रमणमा जाँदा कसरी भयो तनाव ? — Sanchar Kendra
१प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहणविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
२एउटै स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ गर्भवती, कारण सुन्दा सबै चकित (भिडियो सहित)
३बच्चाको तालुमा प्वाल देखेपछि आत्तिँदै अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा बाउआमा लज्जित
४कोरोनाको तेस्रो लहर आए बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी जोखिम, विज्ञहरुले दिए यस्तो कडा चेतवानी
५इजरायल-प्यालेस्टाइन यु’द्ध- कुन देश कसको पक्षमा ?
६श्रीमतीसंग डिभोर्स गरेका बिल गेट्सलाई आइलाग्यो यस्तो संकट, बेग्लै रहस्य खुलेपछि अमेरिकाभर तरंग
७भारतमा आएको शक्तिशाली चक्रवात ‘टाउ टेई’ को असर नेपालमा ५ दिन पर्ने
८दुई मन्त्री र कांग्रेसका नेतासहित चार जना सिबिआईद्वारा पक्राउ, यस्तो छ कसुर
९आज २०७८ जेठ ४ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस
१०सर्वोच्चले ओली सरकारलाई बल्ल दियो यस्तो कडा आदेश
११कोरोना महामारीकाबीच श’वले भरियो गंगा नदीको किनार, हरेक दिन बगेर आउँछन् ६०-७० शव
१२जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
कसले गर्‍यो राष्ट्रपति भण्डारीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड ? राजकीय भ्रमणमा जाँदा कसरी भयो तनाव ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको राजकीय भ्रमण छोट्याएर बुधबार स्वेदश फर्किएकी छन् । उनलाई विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले स्वागत गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भोलि बिहीबार मात्र फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, बेइजिङको महत्वपूर्ण भेटघाट सकेर ल्हासा हुँदै फर्किने क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या देखियो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासामा पुगेपछि राष्ट्रपतिमा ‘हाई अल्टिच्युड’का कारण समस्या देखिएको प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए ।
समुद्री सतहबाट ११ हजार ९७५ (३६५९) मिटरमा अवस्थित ल्हासामा तल्लो सतहबाट सीधै जाँदा हाई अल्टिच्युड हुने गर्छ । ल्हासा भ्रमणका क्रममा भण्डारीलाई हाईअल्टिच्युड सिकनेस भएको भनिएको छ ।
दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमको शिखर सम्मेलनको सिलसिला पारेर भएको राजकीय भ्रमणमा चीन आएकी राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङ आउँदा नै थकित भइसकेकी थिइन् । बेइजिङमा राष्ट्रपति भण्डारीका यति धपेडीयुक्त कार्यक्रमहरु थिए कि उनको बेइजिङ बसाइ पूरापूर व्यस्त रह्यो ।
त्यसो त पहिल्यैदेखि नै हल्का बिरामी रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीको खानपिनमा फरकपन, लामो समयसम्म एकै स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यता, मौसमको प्रतिकुलता, अति व्यस्त कार्यक्रम, सम्बोधनका धेरै कार्यक्रम र भिडभाडयुक्त वातावरण पनि स्वास्थ्य बिग्रनुमा जिम्मेबार छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी सान्सी प्रान्तको सियान सहरमा एकरात बसेर चीनको राजधानी आएकी थिइन् । जानकारहरुका अनुसार सियानमा खासै अर्थपूर्ण वा अति आवश्यक भ्रमण थिएन । त्यहाँ एकजना नेपालीको जोडमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सियानको भ्रमण गराउन सफल भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिरामी राष्ट्रप्रमुखलाई राजकीय भ्रमण गराउँदा किन सिधै बेइजिङमा ओर्लने र बेइजिङबाट कार्यक्रम सकेर सीधै नेपाल फर्कने छोटो र छरितो तालिका निर्धारण गर्न सकेन ? यसो गरेको भए भ्रमण सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस–३२० बाट सियान ओर्लेकी थिइन् । निगम स्रोतका अनुसार एयरबस–३२० ले काठमाडौंबाट सीधै बेइजिङसम्म उडान भर्न सक्छ । त्यसर्थ, प्राविधिक कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको टोली बेइजिङ नगई सियानमा बस्नुपरेको होइन ।
बेइजिङमा के-के भए कार्यक्रम ?
बेइजिङ आएको दोस्रो दिन बेल्ट एण्ड रोड फोरमको शिखर सम्मेलनको उद्घाटन, त्यसपछि गोलमेच, तेस्रो दिन पनि गोलमेच बैठकमा सम्बोधन, अनि बेइजिङको बाहिरी भागमा रहेको स्थानमा भएको समापन समारोह र त्यही साँझ राष्ट्रपति भण्डारीको स्वागतमा नेपाली दुतावासले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा सहभागी हुदाँ उनी अति व्यस्त र थकित देखिन्थिन् ।
यतिमै राष्ट्रपतिको कार्यक्रम सकिएन । उनी त्यसको भोलिपल्ट चीनको राजधानीका विभिन्न स्थानको भ्रमणमा निस्किइन् । र, साँझ अबेरसम्म फेरि चिनियाँ समकक्षी सि जिनपिङसँगै हर्टिकल्चर मेलाको उदघाटन समारोहमा सहभागी भइन् ।
बेइजिङबाट ल्हासा उड्नु अघिल्लो दिन चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग दुईपक्षीय भेटघाट भयो । र भोलिपल्ट बिहान सबेरै तिब्बततर्फको उडान भयो । यसपटक निक्कै नै व्यस्त कार्यतालिकामा काम गरेका कारण राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
उसो त चाइना रेडियोको नेपाली विभागमा कार्यरत पत्रकार लक्ष्मी लम्सालले पोस्ट गरेको ट्वीटमा पनि हाइ अल्टिच्युटले राष्ट्रपति भण्डारीलाई गाह्रो बनाएको कुरा उल्लेख छ।
‘तिब्बतको छिमेकी छिङहाइ प्रान्तमा पुग्दा त रिंगटा लागेर हैरान भएको याद छ। त्यसबेला होटलका कोठामा पनि अक्सिजनको भाँडो राखिदिएको थियो। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तिब्बतमा पुग्दा हाइ अल्टिच्युटले गाह्रो बनायो। त्यसैले भ्रमण बीचमै छोट्याएर आजै काठमाडौं फर्किनुपर्यो’, ट्वीटरमा लक्ष्मीले लेखेका छन्।
यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले जापानका सम्राट नारुहितोले गद्दी आरोहण गरेकामा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सम्राट नारुहितोको गद्दी आरोहणसँगै प्रारम्भ भएको ‘रिवा’ युगमा नेपाल र जापानबीचको हार्दिकतापूर्ण धेरै पुरानो मित्रवत् सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जापानी सम्राटलाई बुधबार पठाएको बधाइ सन्देशमा उनको सुख, सुस्वास्थ्यका साथै रिवा युगमा जापानी जनताको निरन्तर शान्ति, प्रगति र समृद्धिको कामना गरेकी छन् ।